Ilula kwaye iyasebenza
NdinguChandler, uMseki wohlobo lweKAMED. Luphawu endizingcayo ngalo. Xa ndandwendwela abathengi bam phesheya, bahlala bebuza ukuba kutheni ibizwa ngokuba yiKAMED? Ngaba inentsingiselo ekhethekileyo? Ndiphendule ewe. Ibali elide malunga nabazali bam kunye nam. Ngelo xesha inkumbulo yam yaya kula maxesha…
Iminyaka ka-2003 — Ngosuku olwandulela ukuphumelela kwam eyunivesithi, i-SARS yeza ndingalindelanga. Uninzi lwabasebenzi bezonyango babesilwa ngenkalipho kumlo wokuqala wokulwa ne-SARS. Nabanye abasebenzi bezonyango baphulukana nobomi babo obuxabisekileyo kweli dabi, thina, ababeza kuphumelela kwiyunivesithi yezonyango, saqonda ukuba sinoxanduva olukhulu kwaye sizimisele nokuzama. Besinethemba lokuthweswa isidanga kwaye sijoyine iqela loogqirha ngokukhawuleza, sinikele ngamandla ethu okusindisa abaguli abaninzi, kwaye sibuyisele uxolo lwangempela noxolo lweli hlabathi. Nangona kunjalo, kum, ukongeza kwixhala elifanayo nelabo ndifunda nabo, kukho uxinzelelo ngakumbi malunga nezihlobo zam.
Umama nomntakwethu babehlala eGuangzhou, indawo eyayichaphazeleke kanobom yi-SARS, kwaye ubomi babo babusongelwa lusulelo nanini na. Ndifowunele umama ndikhathazekile yonke imihla. Xa kwathathwa umnxeba, intliziyo yam eyayixhonyiwe ngequbuliso yakhululeka, ndonwabile okomntwana ezandleni zikamama, ndisiva ubushushu nothando olulahlekileyo. Ngethamsanqa, i-SARS isonjululwe ngabasebenzi abaphambili bezonyango ukugqiba kwam. Sonke siyabuxabisa obu bomi buphumeleleyo. Ukusukela ngoko, imbewu ityalwe entliziyweni yam: yinyamekele kakuhle usapho lwam kwaye wenze uphawu olunokundivumela ndifunde into yokunceda abantu abaninzi.
Unyaka wama-2005 —— Emva kweminyaka emibini yoqeqesho kwinkampani eyenza amayeza, ndafunda lukhulu ngamayeza, kuquka izinto ezisetyenziswa kunyango, izixhobo zonyango, iimveliso kunye neendlela zokusebenzisa izixhobo zonyango. Iminyaka emibini yamava omsebenzi indenze ndayazi indlela yokufezekisa iphupha lam ngokukhawuleza kwaye ndikwazi ukusebenzisa endikufundileyo. Ngenxa yoko, ndayeka emsebenzini ndaza ndaziqalela ishishini ngoNovemba waloo nyaka. Ndaseka inkampani ebizwa ngokuba yi-CARE MEDICAL. Khange ndithandabuze xa ndikhetha eli gama. Kungenxa yokuba ndiphantse ndalahlekelwa ngumntu endimthandayo, indenza ukuba ndikwazi ukwakha imeko yokuqina kunye noxanduva lokukhathalela usapho lwam kakuhle kunangaphambili. Ndiyathemba ukuba inkampani yam iyakusasaza ukwamkelwa kokubaluleka nokungabekwa kwakhona kwezihlobo zabo kubantu abancinci ngakumbi. Isiqubulo sethu sentengiso sithi: Ufanelwe ukukhathalelwa kakuhle…. Ngapha koko, usapho lwakho kufuneka lukhathalelwe ngcono, kwaye unoxanduva olungagungqiyo kusapho lwakho.
Unyaka ka-2007-- Ngosuku olunye oluqhelekileyo, ndafumana umnxeba kutata. Undixelele ngesisu esophayo. Ndikhawuleze ndabeka lento ndiyenzayo ndamsa ngqo esibhedlele. Ngelishwa, utata wam osele ekhulile wafumanisa ukuba unomhlaza wamathumbu. Ngelixesha lokulaliswa kukatata, ndandibekela bucala yonke into ngesandla ndandihlala naye yonke imihla. Xa ndabona ukuba izinto ezisetyenziswayo kunye nezixhobo endizithengisileyo zamkelwa umzimba katata, ngequbuliso ndiye ndabona ukuba ndinoxanduva lomntu wonke osebenzisa iimveliso zam. Isigulana ngasinye esingena esibhedlele sibeka ithemba kunye nekamva kwezi mveliso, ngakumbi abaguli abanomhlaza. Xa ndancokola naye wonke umntu ebhedini, bathi bayakholelwa kwisayensi nakugqirha. Banokholo olomeleleyo lokulwa esi sifo. Ezi ncoko ziwuchaphazele ngokunzulu umphefumlo wam kwaye zindenze ndakholelwa kwi-slogan-efana nokugxila kumgangatho okwenyani. Ngelishwa, utata wandishiya ngonaphakade emva konyaka unyango. Nangona kunjalo, ndiye ndafunda ukuba kufuneka sibe phantsi ukuze sikwazi ukufezekisa eyona mveliso igqibeleleyo ukuqhuba ishishini, ukuzisa ithemba kunye nobuhle kubantu abaninzi.
Abasebenzi benkampani yethu bahlala besebenza benemvakalelo yokuqina koxanduva kunye noxanduva kwezentlalo. Ke ngoko, kwinkqubo enzima yokushishina engaphezu kweminyaka elishumi, ukukhula kwemveliso kunye nokukhethwa kwabanikezeli beenkonzo kuye kwahlolwa. Ngokumalunga nolawulo lomgangatho, inkolelo yethu yile: iimveliso ezingayifikeleliyo imigangatho aziyi kuqaliswa, kwaye iimveliso ezingayifikeleliyo imigangatho azikhuthazwa. Ngokwentsebenziswano namaqabane, ukhetho lwethu kukuba: iinkampani ezingenalo uluvo lokunyaniseka kunye nolawulo lomgangatho aziyi kusebenzisana ukukhusela iimveliso ezibolileyo ekungeneni ziye emarikeni. Ifilosofi yenkampani yethu yoshishini kukuphuhlisa iimveliso ezikhuselekileyo nezisebenzayo kubathengi. Siphelisa iimveliso ezichaseneyo nefilosofi yenkampani yethu kuba azaneli nje ukwanelisa amava abathengi kodwa zonakalisa nexabiso lentlalontle lophawu lwethu. I-KAMED ayisiyophawu nje, kodwa yinkolelo kunye nexabiso lomgangatho olandela ukugqibelela kwaye ungaze ulalanise.